Corralejo၊ ပင်လယ်၊ ခုံများနှင့်ကမ်းခြေများ ခရီးသွားသတင်း
Corralejo၊ ပင်လယ်၊ ခုံများနှင့်ကမ်းခြေများ
Mariela Carril | | Espana, ကျွန်းများ
မင်းကြိုက်တယ် ကိန္နရီကျွန်းများ? ကောင်းပြီ၊ သူတို့ဟာစပိန်တွေကြားမှာသာမကနေရောင်ခြည်နဲ့အပူရှိန်ကိုခံစားနိုင်ဖို့ဒီကိုလာတဲ့အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့တိုင်းပြည်ကလာတဲ့ဥရောပသားတွေကြားမှာခရီးသွား great ည့်နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ဂျာမန်ဥပမာ။
ဒီနေ့ကနေရီကျွန်းစုကိုသွားတဲ့နေရာက Corralejo၏ကျွန်းပေါ်တွင် Fuerteventura။ ခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းခုံများ၊ ကမ်းခြေများနှင့်ပင်လယ်တို့ဖြစ်သည်။
2 Corralejo နှင့်၎င်း၏အလှအပများ
Canary များသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရှိပြီးအာဖရိကကမ်းရိုးတန်းမှကီလိုမီတာ ၁၀၀ အောက်တွင်ရှိသည်။ Fuerteventura ယခုဆယ်နှစ်များအတွက်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် အရံဒါဆိုမင်းတို့ရှေ့မှာငါခေါ်ခဲ့တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေအတွက်သဘာဝတရားတစ်ခုတည်ရှိမှုကိုထပ်ဖြည့်ရမယ်။
ကျွန်း၏မြို့တော်ဖြစ်သည် Puerto del Rosarioဟောင်း Puerto Cabras ။ ၎င်းသည် ၁၆၅၉ စတုရန်းကီလိုမီတာအကျယ်အဝန်းရှိပြီးစတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောလူ ဦး ရေအများဆုံးစတုတ္ထကျွန်းဖြစ်ပြီးကျွန်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။ ထို့အပြင်ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကဆို အုပ်စု၏အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
Corrajeo သည်ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည့်မြို့ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ခရီးသွား most ည့်သည်များအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် Corralejo သဘာဝပန်းခြံကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးပိုင်ဆိုင်သည့် ၂.၅ မှ ၁၀၊ ၅ ကီလိုမီတာရှိသောကမ်းရိုးတန်းအစရှိသည် ခြားနားနှစ်ခုကဏ္sectorsများ။ တောင်ဘက်ခြမ်းမှရှုခင်းသည် မီးတောင်သိသိသာသာ, ကြမ်းတမ်းနီနှင့် ocher အလွန်မီးတောင်။ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် သဲများ ရွှေ အဖြူရောင်သဲများ နှင့် စိမ်းပင်လယ်.
Lanzarote သို့ကူးတို့သင်္ဘောသည် ၁၅ မိနစ်သာကွာဝေးသော Corralejo ဆိပ်ကမ်းမှထွက်ခွာရာ Fuerteventura ရှိကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံး ဦး တည်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရီးသွားနိုင်သည် Corralejo မြို့အလယ်ဗဟို, ဟောင်းနှင့် quaint ။ ဒါဟာအတူအနိမ့်အဖြူအိမ်များ၏အုပ်စုတစုဖြစ်ပါတယ် ပြတင်းပေါက်များနှင့်တံခါးများအလွန်မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၊ ဘော်ဒါဆောင်များ၊ ဈေးဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များဖြစ်သောအိမ်များသည်အကြိမ်တစ်ထောင်လောက်လမ်းများပေါ်သို့လမ်းလွဲသွားကြသည်။
ထိုအခါရှိပါတယ် Corralejo ကမ်းခြေ, သဘာဝပန်းခြံအတွင်း။ သင်ကားဖြင့်ထိုသို့ရောက်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကားဖြင့်မဝင်ရသောကြောင့်တံခါးဝ၌ရပ်ထားပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်လိုသည့်အရာများကိုစဉ်းစားရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မီးတောင်goရိယာသို့သွားလျှင်လှပသောကြောင့်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဖိနပ်များကို ၀ တ်ဆင်ရမည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုMontaña Roja မီးတောင်ဆီပို့ဆောင်မယ့်မီတာ ၃၀၀ လမ်းကြောင်း။
ဒီကနေကြည့်ရတာကြည့်ရတာအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ La Graciosa နှင့် Lanzarote ကျွန်းများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အကောင်းဆုံးပို့စကတ်များဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့သည်နေနှင့်ပင်လယ်ကိုပျော်မွေ့ကြမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့ပျော်ရွှင်ရမည် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုမခံရန်ရှည်လျားစွာနေရန်စီစဉ်လျှင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်လယ်၌နက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်ကြီးစွာတည်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုအားသာချက်ယူပြီးပင်လယ်၌လှုပ်ရှားမှုအချို့ပြုလုပ်နိုင်သည် ရေအောက်သတ္တဝါမျိုးစုံ.
Cornejo ရဲ့ကမ်းခြေတွေမှာငါတို့လုပ်နိုင်တယ် လှော် surfing, surfing, ရေငုပ်, အားကစားငါးဖမ်းသို့မဟုတ်စွန် ထို့အပြင်လှေခရီးစဉ်။ Surfing ကိုတစ်နှစ်တာအချိန်၌သာလေ့ကျင့်နိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းလှိုင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသော caldera ၏အခြေစိုက်စခန်းတွင်ဖြစ်သည်။
လှေဖြင့်တတ်နိုင် Isla de Lobos သို့ရောက်ရှိရုံနှစ်ကီလိုမီတာကွာ။ လှေစီးခြင်းသည်ချစ်စရာကောင်းသည်။ သင်သည်အခြားကျွန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Fuerteventura ၏လှပသောအခြားကျွန်းတစ်ကျွန်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။ Isla de Lobos တွင် ၆ စတုရန်းကီလိုမီတာနှင့် ၁၂၀ မီတာအမြင့်ရှိသည်။
ကျွန်းငယ်သည်ဖြစ်သော်လည်းဤတွင်အချို့ရှိပါသည် အပင်မျိုးစိတ် ၁၃၀ နှင့်ရေအောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအရံအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပုလဲ၊ တကယ့်ရတနာဖြစ်သည်။ ကျွန်းတွင်စားသောက်ဆိုင်နှင့်သင်စခန်းချနိုင်သည့်hasရိယာရှိသည် အဆိုပါကမ်းခြေအပျိုဖြစ်ကြသည်ရွှေသဲနှင့်ကြည်လင်သောရေတို့ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကမ်းခြေများမှာ La Concha ကမ်းခြေ, ကြီးတွေ, ရွှေ, နှင့် အယ်လ် Puertito ကမ်းခြေပိုမိုတောင့်တင်းသော၊ သေးငယ်သည့်မြို့စွန်ရှိကန်များနှင့်စိမ်းသောရေများရှိသည်။
ကျနော်တို့အထက်အမည် Corralejo ၏သဲခုံCorralejo မြို့နှင့် ၅ ကီလိုမီတာအကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ဒီအပိုင်းက 1994 ခုနှစ်ကတည်းကတစ် ဦး ကာကွယ်ထားပန်းခြံ, များစွာသောငှက်နှင့်အတူ။ Puerto del Rosario ၏လမ်းကြောင်းကိုသွားသောခုံများသည်လမ်းဘေးတွင်ရှိပြီး visitors ည့်သည်များအစဉ်အမြဲရှိသည်။
အနှစ်ချုပ်, Corralejo တွင်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ Isla de Lobos သို့ catamaran ဖြင့်သွားပါ။ တစ် ဦး schooner အပေါ်သွားပါ Fuerteventura ကျွန်း၏တောင်ဘက်ကို ဖြတ်၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ Timanfaya အမျိုးသားဥယျာဉ်တစ် ဦး လုပ် quad သို့မဟုတ် jeep Safari စီး, ခုံမှတဆင့်လမ်းလျှောက်, လျှပ်စစ်စက်ဘီးစီးလုပ်ပါ La Oliva, Morro Jable သို့မဟုတ် Betancuria သို့လေ့လာရေးခရီး... ပြီးတော့သင်တန်း၏ဒေသခံညနှင့် gastronomy ပျော်မွေ့။
Corrajelo ၏မြို့ဟောင်းရှိပါတယ် ကျန်ကြွင်းသောအရပ်, အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နှင့်များစွာသောအရက်ဆိုင် ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာအစားအစာများကို။ ၎င်းတို့သည်ငါးများ၊ တက်တူးများ၊ ခြေထောက်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်အမျိုးမျိုး၊ ထမင်းဟင်းအမျိုးမျိုး၊ ပင်လယ်စာများ၊ ကလာပ်စည်းများ၊ ဆိတ်များ၊ အမြဲလတ်ဆတ်အမြဲအရသာရှိတဲ့။
တကယ်တော့တစ်ယောက်ကအမှတ်တရပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်ချင်တယ်၊ စျေးဝယ်ထွက်ချင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဆိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်တွေသွားဖို့အချိန်အမြဲတမ်းရှိတယ်။ သင်လက်လွတ်နိုင်သည့်အမှတ်တရလက်ဆောင်လား? လတ်ဆတ်သောရှားစောင်းလက်ပတ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းတို့မှာအချိန်ရှိပြီးရေပန်းဥယျာဉ်ကိုလာလည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Acua ရေပန်းခြံဆလိုက်များ၊ လှိုင်းရေကန်များ၊ ဂေါက်သီးအသေးများ၊ ၎င်းသည် Avenida de Nuestra Señora del Carmen တွင်တည်ရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့်နံနက် ၁၀း၃၀ မှညနေ ၅း၃၀ အထိလူကြီးတစ် ဦး လျှင် ၂၂ ယူရိုဝင်ကြေးရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကျွန်းများ » Corralejo၊ ပင်လယ်၊ ခုံများနှင့်ကမ်းခြေများ